Iindaba - Kunyaka olandelayo iipesenti ezingama-86 zephaneli yeTV yeTV ziya kutyiwa ngabo!
Iarhente yophando ngeemarike iOmdia ikhuphe ulwazi lwamva nje, kuqikelelwa ukuba ukuthunyelwa kwephaneli yeLCD izakuba zizigidi ezingama-256 ngonyaka ka-2021. Iipesenti ezi-6 ngonyaka, kodwa umthamo wokuthengwa kweefektri ezili-10 eziphambili zeempawu zikamabonakude ukhule kakhulu ukuya kuma-86%. ， Kunyaka olandelayo, kunokubangela umlo kwizixhobo zepaneli yeTV.
Ngokwengxelo yakutshanje ka-Omdia "IPhaneli yeTV kunye neNkonzo yoLwazi lwe-OEM", Abenzi abaphezulu be-TV abaphezulu abali-10 Samsung 、 LG 、 TCL, Hisense 、 Skyworth 、 TPV 、 Changhong 、 Sony 、 Vestel no Konka baceba ukuthenga iipaneli ze-TV ze-LCD ezizizigidi ezingama-200 ngo-2021, Imisebenzi Iipesenti ezingama-86 zonikezelo lwehlabathi, oku kunyuka ukusuka kuma-70% ngo-2020 okanye ngama-64% ngowama-2018.
U-Omdia uthe, Okwangoku, abavelisi beepaneli zeTV abanakho ukuhlangabezana ngokupheleleyo nenani labenzi beTV abakumgangatho wokuqala abaza kuthenga ngo-2021, Samsung, LGE, TCL 、 Hisense naseSkyworth zonke zifuna ukonyuka nge-10-15% kunikezelo lwepaneli ngo-2021. Izicwangciso zabenzi abalishumi abaphezulu beTV zibonisiwe kulo mzobo ungezantsi:
Ngombono wonikezelo kunye nemfuno yentengiso yephaneli yeTV, Ngaphambili, iTrendForce, omnye umbutho wophando wentengiso, ikwakhuphe ingxelo isithi, Ukubonelelwa kwephaneli kunye nemfuno ziya kuqina kwisiqingatha sesibini sika-2020, Ikota yesine iqikelelwa ukuba ibe malunga ne-0.2%, Umyinge wemfuno yokubonelelwa kwikota nganye yesiqingatha sokuqala sika-2021 malunga ne-2.4% kunye ne-1.4%, Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwephaneli yeTV ngo-2021 kuyakwehla nge-6.1%。
UTrendForce uthe, nangona kuzakubakho isigaba sesibini se-Huaxing Optoelectronics 'isityalo se-11th isityalo kunye neHuike Changsha 8.6-isityalo semveliso ngo-2021, Kodwa i-Samsung yarhoxa kwimakethi ye-LCD TV, i-LGD, i-AUO, kunye ne-Innolux zonke zitshintshile amandla emveliso kwiipaneli ze-IT, Ukunciphisa ukubonelelwa ngokubanzi kweepaneli zeTV.
I-TrendForce iqikelela ukuba ukuthunyelwa kwepaneli yeTV iyonke malunga ne-2021 iyakuba malunga nezigidi ezingama-251, Oku kuncipha kwe-6.1% xa kuthelekiswa nonyaka. I-BOE, i-Huaxing Optoelectronics kunye ne-Huike yaba ngabanikezeli beepaneli ezintathu eziphezulu ze-TV. ukukhula kwamanani aphindwe kabini
Ukongeza, ngokweengxelo, Njengoko ishishini lenjongo liphucuka, abenzi bephaneli abaphambili beSouth Korea, iSamsung Display (SDC) kunye neLGD Display (LGD), zitshintshile neqhinga lokusebenza .Imiboniso yeendaba zamva nje, isigqibo seLGD sokuvala iphaneli yeLCD Umzi-mveliso waseMzantsi Korea uthathe isigqibo sokumisa elinye ixesha, i-Samsung ekuqaleni yayiza kuthi irhoxe kwimveliso ye-LCD ekupheleni kwalo nyaka, Ngoku kunokwenzeka ukuba uyihlehlise iinyanga ezintathu.
Isamsung Nokia LG ilibazisile ukurhoxa kwimarike yeLCD, Ngaba iphaneli iya kubonelela 、 Ngaba ixabiso linempembelelo? UQiu Yubin, usekela-mongameli weTrendForce yoPhando, uthe, Kule meko, u-Qiu Yubin ukholelwa, kuba unikezelo lweepaneli ze-TV ziya kuqhubeka ukwehla kunyaka olandelayo, ke ngoko, ifuthe kunikezelo nakwimfuno iyonke lilinganiselwe; ukuza kuthi ga ngoku, Umkhwa wokuba iphaneli iya kuqhubeka ukunyuka phambi kokuphela konyaka (ukunyuka kuya kuguquka kancinane) ayizukutshintsha kwaye Njengobungakanani bemveliso ye-SDC ayinkulu, kwaye ubukhulu becala ibonelela ngohlobo lwayo, Ifuthe kunikezelo lweemarike nakwimfuno kulinganiselwe; Ewe kunjalo, kukho iimbono ezithile kwintengiso eziza kudibanisa ezi ndaba neflethi ukuya kwithontsi elincinci kumaxabiso e-Q1 kunyaka ozayo, Nangona kunjalo, ukuncipha kwamaxabiso kusekho ngenxa yexesha lonyaka.